Tsy mieritreritra ny Amerikanina fa tapitra ny aretina ratsy indrindra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Tsy mieritreritra ny Amerikanina fa tapitra ny aretina ratsy indrindra
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fahatokisan'ny Amerikanina fa tapitra ny areti-mifindra voan'ny coronavirus dia nihena hatramin'ny 23%.
23% ny Amerikanina milaza fa tapitra ny areti-mifindra COVID-19 ratsy indrindra.
74% ny Amerikanina no manohana manao sarontava any an-tsekoly.
75% ny Amerikanina manohana manao saron-tava amin'ny toerana ampahibemaso.
Ny valin'ny fitsapan-kevitra nasionaly vao navoaka dia nampiharihary fa ny fahatokisan'ny Amerikanina fa tapitra ny areti-mifindra voan'ny coronavirus dia nihena hatramin'ny 23% niditra tamin'ny fararanon'ny 2021 raha ampitahaina amin'ny fidirana amin'ny fahavaratra 2021 (53%) satria ny Delta variant Delta be dia be.
23% NY AMERIKANINA NO MITENY IZAO TAMIN'NY PANDEMIKA CORONAVIRUS dia TAPITRA (Nidina hatramin'ny 52% tamin'ny Jona 2021 ary 25% tamin'ny FEBRUARY 2021)
Fanontaniana no nanontaniana raha izany mino fa tapitra ny aretina ratsy indrindra. Amin'ny ankapobeny, 23% ny olona namaly dia nilaza hoe eny, izay ambany kokoa noho ny 53% tamin'ny Jona 2021 ary ny 25% tamin'ny volana febroary 2021 tamin'ny alàlan'ny fitsapan-kevi-pirenena. Ireo mpamaly 18 taona 29-27 dia mino fa ny ratsy indrindra dia vita amin'ny taha ambony kokoa (60%) raha oharina amin'ireo 18 taona no ho miakatra (30%). Mino ny lehilahy fa ny ratsy indrindra dia vita amin'ny taha ambony (17%) noho ny vehivavy (36%). Ireo mpihetsiketsika manana taha matoky avo indrindra fa tapitra ny areti-mifindra voan'ny coronavirus dia ny Repoblikana (23%), arahin'ireo Independents (15%) sy ny Demokraty (XNUMX%).
72% NY AMERIKANINA MOMBA NY ADOLESCENTA 12 hatramin'ny 18 taona
Nanontaniana ny Amerikanina raha toa izy ireo ka manome soso-kevitra ireo tanora 12 ka hatramin'ny 18 taona hatao vaksinin'ny vaksinin'ny FDA. Ny 72% tamin'ireo namaly dia nilaza hoe eny. 90% n'ny Demokraty no nilaza hoe eny. Ny 66% -n'ny Fahaleovan-tena / Ny hafa kosa nilaza hoe eny. 53% n'ny Repoblikana no nilaza hoe eny.
74% NY AMERIKANINA MANOHANA MASO NY SEKOLY HANAMARANA NY FITARITAN'NY CORONAVIRUS
Nanontaniana ny olona voavaly raha manohana ny fanaovana sarontava any an-tsekoly izy ireo mba hampihenana ny fihanaky ny virus coronavirus. Ny 74% amin'ireo namaly dia nilaza hoe eny. Ny 92% n'ny Demokraty dia nilaza hoe eny. 71% -n'ny Fahaleovan-tena / Hafa no nilaza hoe eny. 50% n'ny Repoblikana no nilaza hoe eny.
75% NY AMERIKANINA MANOHANA MASO AO AMIN'NY TOERAM-PIRENENA HANORANA NY FITARITAN'NY CORONAVIRUS
Nanontaniana ny olona voavaly raha manohana ny fanaovana sarontava amin'ny toerana ampahibemaso izy ireo mba hampihenana ny fiparitahan'ny virus coronavirus. Ny 75% amin'ireo namaly dia nilaza hoe eny. Ny 92% n'ny Demokraty dia nilaza hoe eny. 72% n'ny Fahaleovan-tena / Hafa nilaza hoe eny. 52% n'ny Repoblikana no nilaza hoe eny.